अन्तर्जातिय विवाह गरेकी डान्सर सम्झना बेहुली भेषमै आईन् टिकटक लाईभ
राजेश हमालले गरे ११३ जना चलचित्र प्राविधिकलाई सहयोग
राजेश हमालले गरे ११३ जना चलचित्र प्राविधिकलाई सहयोग - www.dthreeonline.com
ईटहरी/ कोरोना भाइरसका कारण विगत ६ महिनादेखि चलचित्र निर्माण ठप्प हुँदा रोजीरोटी गुमेर दैनिक जीवनयापन गर्न समस्या भएका प्राविधिकहरुलाई अभिनेता राजेश हमालले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । शनिवार डिल्लीबजारस्थित विजय स्मारक विद्यालयमा उनले १ सय १३ जना आर्थिक
स्व. राष्ट्रकविको ५३ वर्षअघि सिर्जित गीत, सम्झनामा रचना र प्रवीणले भरे स्वर
स्व. राष्ट्रकविको ५३ वर्षअघि सिर्जित गीत, सम्झनामा रचना र प्रवीणले भरे स्वर - www.dthreeonline.com
ईटहरी/ स्व. राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले २०२४ सालतिर अर्थात आज भन्दा ५३ वर्ष अघि कोरेको ‘उनको प्रिती’ बोलको गित पुन: निर्माण गरिएको छ । २०६० सालमा नारायण रायमाझीले संगीत गरेर पहिलो पटक रेकर्ड गरिएको उक्त गितलाई गीतका संरक्षक रायमाझीले
यी तस्वीरहरुको सामाजिक संजालमा किन हुँदैछ चर्चा ? (फोटो सहित)
यी तस्वीरहरुको सामाजिक संजालमा किन हुँदैछ चर्चा ? (फोटो सहित) - www.dthreeonline.com
ईटहरी/ चरित्रलाई चित्रमा उतार्ने सस्कार पछिल्लो समय निकै एड्भान्स भएको छ । डिजिटल दुनियाले फड्को मारेसंगै फोटोको स्तरपनी एचडीमा पुगेको अवस्था छ । यहि फोटो चित्र जिन्दगिको महत्त्वपूर्ण शब्दचित्रको रुपमा लिन सक्ने उदाहरणहरु पछिल्लो समय निकै छन् । यस्तै
पलसंगको पुरानो दिन सम्झिदै आँचल, के यो सम्बन्ध सुध्रिने संकेत हो ?
पलसंगको पुरानो दिन सम्झिदै आँचल, के यो सम्बन्ध सुध्रिने संकेत हो ? - www.dthreeonline.com
ईटहरी/ म्यूजिक भिडियोको दुनियाँमा आँचल शर्माभन्दा अगाडि पल शाहले आफ्नो उपस्थिति जनाए पनि फिल्म करिअर भने उनीहरुले एकसाथ सुरु गरेका थिए । विकासराज आचार्य निर्देशित फिल्म ‘नाईं नभन्नू ल ४’ बाट यो जोडीले अभिनेता-अभिनेत्रीको रुपमा ब्रेक पाएका थिए । यो फि
परिकला मिडिया प्राली
Lives in ईटहरी, सुनसरी, नेपाल
यो प्रदेश १ को एकमात्र मनोरञ्जनात्मक अनलाइन पत्रीका हो ।
Rate DThree Online